Sina Runjin © Krunt ™ -4000 Fanamboarana sy famokarana milina fanamboarana voankazo | Runchen
Ataovy ao anaty gilasy ny granule voankazo maina, granule siramamy na granule ranon-javatra. (Tsy mety amin'ny fitaovana viscous ny fitaovana, ary koa ireo mandoka hamandoana mora na mora entina)
Ny motera dia mamily visy habetsahana hampita granula. Ampiana granule ao anaty gilasy amin'ny fomba mahomby sy miorim-paka amin'ny vano paompy, avy eo afangaro ny mixeur granule sy ny gilasy avy amin'ny mixer namboarina eo ambanin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka.
VoankazoTM-4000 dia mpamatsy granule voankazo ary afaka mamaly tanteraka ny filan'ny fahadiovana ara-tsakafo .Ny fitaovana dia vita amin'ny faritra avo lenta ary ny endriny dia afaka mifanaraka amin'ny fenitry ny fahadiovana, azo itokisana ary maharitra. Ny faritra rehetra mety hifandray amin'ny gilasy gilasy dia vita amin'ny vy tsy metaly 304 .Misy fametrahana casters amin'ny tongotra fitaovana, izay mety ho mora mihetsika sy mametraka azy.
Hopper Sy Cup Quantitative
Mba hahazoana antoka fa ny volafotsy dia afaka mamahana granule miorina, ny fitaovana fampifangaroana dia apetraka ao anaty hopper .Quantitative screw dia manome granules hidirana amin'ny pump pump vane. ny hafainganam-pandehan'ny visy kuantitative azo ahitsy amin'ny 0% ka hatramin'ny 100%.
Paompy famahanana vane
Ny paompy famahanana vane dia ao anatin'ireo kodiarana fiara amin'ny lelany. Izy io dia afaka mampifangaro granula miaraka amina gilasy gilasy avy amin'ilay milina mangatsiaka mitohy .Ny fivoaran'ny fihodinan'ny vane dia mety mametaka fidiran'ny voankazo, izay afaka mitoka-monina ny ranomandry sy ny rivotra. hiverina hiverina hitondra kodiarana mandeha ho azy izy ary hametaka ny gilasy. Ny fepetra tsy misy dingana dia azo atao amin'ny haingam-pandeha amin'ny kodiarana fiara amin'ny alàlan'ny potentiometra
Ny mixer dia ao amin'ny outlet pump vane. Izy io dia afaka mampifangaro ny gilasy sy ny granula amin'ny voankazo amin'ny fanamiana hafainganam-pandeha.
Fandidiana ny fampifangaroana voankazo
Panel miasa Ny bokotra rehetra miasa dia eo amin'ny tontonana aloha, ary mora ny miasa.
Azo ampiasaina mivantana aorian'ny famatsian-jiro .Mety be izany.
CIP fanadiovana an-tserasera
Ny fomba fanadiovana CIP dia afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny tontonana fandidiana, izay afaka manitsy ny elanelana misy eo amin'ny paompy feeder sy ny fampifangaroana toy ny elanelana tany am-boalohany.
Ny voankazoTM-4000 dia afaka mamokatra 16 ~ 400L / Ora isaky ny andiany amin'ny alàlan'ny fametahana visy isan-karazany.
Components tsy voatery
l ny kojakoja hafa
zavatra fikirana fanamarihana
Motor mifangaro 0,75 KW
Hery manontolo 2,75 KW
Fantsom-pisakafoanana, ivelany 51 mm 2 "hose clamp
Fantsahana fantsom-panafody, ivelany 51 mm 2 "hose clamp
Previous: Runjin Jacket Tank
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Filling Machine